बाँदरले जिस्काउँदा युवतीको कपडा नै च्यातिएपछि - KlipMandu
Entertainment FEATURED Female General Latest News
बाँदरले जिस्काउँदा युवतीको कपडा नै च्यातिएपछि
November 9, 2017 klipmandu0Comments
पुरुषले महिलालाई जिस्काउँछन् यो त सुनिएकै कुरा हो तर, जनावरले जिस्काएको सुनिएको छैन् ।तर, जयपुरको लिडी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पर्ने वीरपुरका महिला बादरको सिकार हुने गरेका छन् । बाँदरहरु महिलालाई घरबाट निस्कनै अप्ठेरो पारिदिन्छन् ।
पीडित महिलाहरु भन्छन्– बाँदरहरु नबोलाएको पाहुँना जसरी एकदमै नजिक आउँछन् र गाला, कानमा पञ्जाले हानेर भाग्छन् । यति मात्रै होइन यिनीहरु कपडा समातेर आफूतिर तान्छन् त कहिले कपडा नै च्यातिदिन्छन् ।
यी बादरहरुले अहिलेसम्म करिब एक दर्जन महिलामाथि हमला गरेका छन् । कसैलाई थप्पड हान्छन् त कसैको गालाका टोक्छन् । यसैक्रममा केही दिन पहिला कम्पनीमा काम गर्ने एक युवतीमाथि अचानक बादरको समूहले समूहले हमला गरे ।
जसबाट ती युवतीको कपडा नै च्यातियो । उनी अर्धनग्न बनिन् । त्यसपछि तीन चार जनाले मिलेर उनलाई बादरको चंगुलबाट बचाए ।समाचार अनुसार त्यहाँका बाँदरहरु महिला र पुरुषलाई फरक व्यवहार गर्छन् ।
← लगानी बाधक ऐन खारेजीमा जोड
के तपाइँ आफ्नो धुमपान लत छुटाउन चाहनुहुन्छ ? चाहनुहुन्छ भने एकपटक पढ्ने कि ? →
Gun shots in Kamaladi,3Indian nationals held
October 31, 2017 klipmandu 0
7 THINGS YOU NEED FOR STYLING IN WINTERS